အကူအညီပေးတာအပြင် ဝေဖန်ထောက်ပြ ဖိအားပေးဖုို့ပါ လုိုလာပြီ ~ Htet Aung Kyaw
အကူအညီပေးတာအပြင် ဝေဖန်ထောက်ပြ ဖိအားပေးဖုို့ပါ လုိုလာပြီ
6:40 AM Htet Aung Kyaw No comments
The Voice Daily, 11-03-2015.
နော်ဝေ ပါလီမန်ရှေ့က ဆန္ဒပြပွဲ
ရန်ကုန်က သပိတ်မှောက်ကျာင်းသားတွေအပေါ် စွမ်းအားရှင်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှုကုို ကန့်ကွက်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲ ရှိတယ်ဆုိုလုို့ နော်ဝေးပါလီမန်ရှေ့ဆီ (မတ်လ ၇ ရက်နေ့) နေ့လည်တနာရီ ၀န်းကျင်မှာ ကျနော်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပမှာ နွေဦးရောက်ပြီဆုိုပေမယ့် အော်စလုို ရာသီဥတုက ထုိုင်းထုိုင်းမှိုင်းမှိုင်းရှိနေဆဲ။ လေအေးတွေတုိုက်နေပြီး အပူချိန်က ၅ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ခန့်သာရှိပါတယ်။
(မတ်လ ၇ ရက်နေ့က နော်ဝေးပါလီမန်ရှေ့ ဆန္ဒပြနေသူများ)
နှင်းကာအကျီတွေ၊ အနွေးထည်ထူထူတွေ၊ ခေါင်းစွပ်တွေ၊ လက်အိတ်တွေ ၀တ်ဆင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အာရှတုိုက် သား ၅၀ ခန့်ဟာ အလံတွေ၊ ဆုိုင်းဘုတ်တွေကုိုင်ပြီး ပါလီမန်ရင်ပြင်ရှေ့မှာစုဝေးနေကြပါတယ်။ စနေနေ့ဖြစ်လုို့ ပါလီ မန်ကပိတ်ထားပေမယ့် လမ်းသွားလမ်းလာ အတော်များများကတော့ ဒီလူတွေ ဘာလုပ်မလဲဆုိုပြီး ကွက်ကြည့်၊ ကွက်ကြည့် လုပ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီလုို ကြည့်နေတုန်း…
‘’ရပ်၊ ရပ်၊ ချက်ချင်းရပ်။… အကြမ်းဖက်မှုတွေ ချက်ချင်းရပ်’’
‘’Burmese Militant Government… Down, Down’’.
‘’Terrorist Burmese Government… Down, Down’’
မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ၂ ဘာသာကြွေးကြော်သံတွေကို ကြားရပြီးတဲ့နောက် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ ကိုမြင့်အေးက ဘာကြောင့် ဒီနေ့၊ ဒီနေရာမှာ ဆန္ဒပြရသလဲဆုိုတဲ့အကြောင်း အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ၂ ဘာသာနဲ့ အကျဉ်းရုံးရှင်းပြပါတယ် ။ လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကျောင်းသားဆန္ဒပြပွဲ၊ ပညာရေး၊ နုိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေးအခြေ နေတွေ၊ ဒီနှစ် ထဲ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖုို့ပြင်နေပုံတွေကို လမ်းသွားလမ်းလာတချို့က ရပ်ပြီးနားထောင်နေကြပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ကြွေးကြော်သံတွေ တခါထပ်အော်ပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၁၉၉၀ လွှတ်တော်အမတ်ဦးဖြစ်သူ ဦးဗုိုလ်သောင်းက မိန့်ခွန်းပြောပါတယ်။ နုိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ သ၀ဏ်လွှာတချို့ဖတ်ပါတယ်။ အဲဒီလုို မိန့်ခွန်းပြောသူတွေထဲက နော်ဝေး-မြန်မာကော်မီတီမှ ညွှန်ကြားရေးမှုး Audun Aagre ရဲ့ စကားအနှစ်ချုပ်ကုို ကောက်နှုတ် တင်ပြချင်ပါတယ်။
နော်ဝေ အရပ်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ စုိုးရိမ်မှု
‘’ခင်ဗျားတုို့အားလုံး ဒီနေရာမှာ အခုလုိုပြန်လာပြီး ဆန္ဒပြနေတာကို မြင်ရတော့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆုိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ ကျော်လုံးလုံး လုပ်လာခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို အခု အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ လုပ်ဖုို့မလုိုတော့ဘူးဆုိုပြီး ကျနော်ထင်ခဲ့မိလုို့ပါ’’ လုို့ သူကနိဒါန်းချီပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အခုသတင်းပတ်အတွင်း မြန်မာနုိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ အခြေနေဆုိုးတွေက ခင်ဗျားတုို့ကုို ဒီနေရာမှာ ဆန္ဒပြဖုို့ တွန်းပို့လုိုက်တယ်ဆုိုတာကို ကျနော် ရင်ထဲ၊ နှလုံးသားထဲကကုို နားလည်ပါတယ် လုို့ပြောပါတယ်။
( NBC မှ Audun အမှာစကားပြောနေစဉ်)
ဒါကြောင့် မြန်မာအစိုးရရဲ့လုပ်ရပ်အပေါ် အားလုံးကမေးခွန်းထုတ်လာပြီး နုိုင်ငံတကာရှိ မြန်မာတွေ လမ်းမပေါ်ပြန် ရောက်လာတယ်။ မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ နုိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေက မြန်မာ့ အခြေအနေအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ဖုို့ သတိရလာစေတယ် လို့သူကပြောပါတယ်။
‘’မြန်မာနုိုင်ငံမှာ စစ်ဖက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးထားလေ့လာဖုို့လုိုပါတယ်။ ဒီမုိုကရေစီသဘောတရားအရ အာဏာ ခွဲဝေမှုရှိတယ်ဆုိုပေမဲ့ စစ်ဖက်က အာဏာတွေအများကြီးကို်င်ထားပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလည်း စစ် ဖက်က သီးခြားလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအနေနဲ့ သမ္မတဦးသိန်း စိန်နဲ့ ၀န်ကြီးတွေရဲ့ပြောဆုိုမှု၊ MPC မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာရဲ့ပြောဆုိုမှုတွေတင်မကပဲ စစ်ဖက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခြေ နေကိုပါ အသေးစိပ်လေ့လာထည့်တွက်ဖုိ့လုိုလာပါတယ်’’ လုို့ Audun ကပြောပါတယ်။
သူရဲ့တွက်ဆချက်အတုိုင်းဆုိုရင် အခုကျောင်းသားတွေကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတဲ့ အရပ်ဝတ်စွမ်းအားရှင်တွေအပါဝင် ရဲ တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကုို ပြည်ထဲရေးကကုိုင်ထားတယ်။ ပြည်ထဲရေးဟာ သမ္မတအောက်မှာမရှိပဲ ကာကွယ်ရေးဦးစီး ချုပ်အောက်မှာတုိုက်ရုိုက်ရှိနေတယ်။ ကျောင်းသားတွေအပါဝင် ဒီမုိုကရေစီအင်အားစုတွေ၊ တုိုင်းရင်းသားအင်အား စုတွေနဲ့ အစိုးရကညှိနှိုင်းနေပေမဲ့ တဖက်ကလုံခြုံရေး၊ စစ်ရေးအခြေနေကိုတော့ စစ်ဖက်က ကုိုင်တွယ်ထားဆဲဖြစ် နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် နုိုင်ငံတကာအသုိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို ထောက်ခံတဲ့အခါမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကလုိုမျိုး ချွင်းချက် မရှိ မျက်စိမှိတ်ထောက်ခံတာမျိုးကိုရပ်ပြီး ကန့်သန့်ချက်တွေ၊ ချွင်းချက်တွေထားပြီး ထောက်ခံတာမျိုး ပြောင်းလုပ်ဖုို့ လုိုလာပြီ။ ဘာမှမဝေဖန်ပဲ တိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့တဲ့ပေါ်လစီကုို ပြန်သုံးသပ်ဖို့လာပြီလုို့ သူကဆုိုပါတယ်။
‘’ရဲ၊ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရဖက်ကတာဝန်ရှိသူတွေက ကျောင်းသားတွေအပါဝင် အတုိုက်ခံအင်အားစုကုို ဘယ်လုို ပြုမူ ဆက်ဆံသလဲဆုိုတာကုို အသေးစိပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖုို့လုိုလာပါတယ်။ တခါ ဒီနှစ်ထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲရှိတဲ့ အတွက် သူတုို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကုို ပြည်သူတွေက လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရဖုို့လုိုပါတယ်။ ဒါကုို စစ်ဖက်နဲ့ လက်ရှိ အစိုးရက လေးစားအသိအမှတ်ပြုဖုို့လုိုပါတယ်။ ဒီလုိုလေးစားလာအောင် နုိုင်တကာအသုိုင်းအ၀ိုင်းက တနည်းနည်း နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လုိုနေပါတယ်’’ လုို့ Audun က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီအရေးကို နှစ်ပေါင်းများစွာကူညီပေးခဲ့သူ NGO တဦးက အခုလုိုပြောသွားပေမဲ့ သူပြောသလုို နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေက လုိုက်လုပ်ပါ့မလား။ နော်ဝေးအစုိုးရ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်နဲ့ ကုလသမဂ္ဂတုို့ဖက်က သူတို့ရဲ့ မူဝါဒတွကို တကယ်ပြန်သုံးသပ်ပါ့မလား ဆုိုတာကတော့ မေးခွန်းအဖြစ်ရှိနေဆဲပါ။ အခုအချိန်ထိတော့ အစိုးရဖက်က စွမ်းအားရှင်တွေသုံးပြီး အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတာကုို ကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ကလွဲပြီး မူဝါဒဆုိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်မယ်ဆုိုတဲ့ ကြေငြာချက်မျိုး မကြားရသေးပါဘူး။
( အီးယူ၊ နော်ဝေးနဲ့ နုိုင်ငံတကာရဲ့ မြန်မာအပေါ်ထားတဲ့ မူဝါဒတွေ ပြန်သုံးသပ်ဖုို့တောင်းဆုိုနေသူများ)
အတိအကျပြောရမယ်ဆုိုရင် လက်ပတ်နီဝတ် အရပ်သားတွေကိုသုံးပြီး အခုလုိုအကြမ်းဖက်နှိပ်နှင်းတာကို ကန့် ကွက်ကြောင်း အမေရိကန်နုိုင်ငံခြားရေးဌာနနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂတုို့က အခုလ ၆ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသူတွေကို ဖမ်းဆီးတာ၊ အင်အာသုံးဖြိုခွဲတာဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ အသွပြောင်းဖို့ ကြိုး ပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ အမေရိကန်ကပြောပါတယ်။
မြန်မာရဲတွေကုို သင်တန်းပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်ရှိသူတို့ရုံးရှေ့မှာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒပြခြင်းကိုခံရတဲ့ အီးယူ ရုံးဖက်ကတော့ သူတုို့အနေနဲ့ ရဲတွေကိုသာ သင်တန်းပေးပြီး လက်ပတ်နီဝတ်တွေဟာ သူတို့နဲ့ဘာမှ မဆုိုင် ဘူးလုို့ပြောပါတယ်။ ဒါအပြင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ ဥပဒေဘောင်ထဲကနေ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း စုဝေး ခွင့်တို့ဟာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရဖြစ်တယ်လို့ အီးယူ ရန်ကုန်ရုံးရဲ့ ကြေညာချက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒီကြေညာချက် ၂ ခုနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့ HRW ရဲ့ ကြေညာချက်ကလွဲရင် တခြားနုိုင်ငံ၊ တခြားအဖွဲ့တွေဆီက တုန့်ပြန်ချက်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ။
အရင်စစ်အစိုးရခေတ်က အစိုးရအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေ ချက်ချင်းထုတ်လေ့ရှိတဲ့ နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေ အခုချိန်မှာ ဘာကြောင့် တုန့်ဆုိုင်းဆုိုင်းဖြစ်ကုန်ကြတာလဲ။ လူ့အခွင့်အရေးထက် စီးပွါးရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖက်ကုို ပုိုအာရုံစုိုက် နေကြလုို့လား။ ဒါမှမဟုတ် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖေါ်မဝေဖန်ပဲနဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကုို သံတမန်နည်းနဲ့ တုိုးတုိုးတိတ် တိတ်နားချနေသလား။
နုိုင်ငံတကာအစိုးရတွေဖက်က မြန်မာအစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးမှုတွေလုပ်လာစေဖုို့အတွက် အဲဒီနုိုင်ငံ အသီးသီး ဆီရောက်နေတဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ လှုပ်ရှားနုိုင်မှုစွမ်းအားကလည်း အရေးကြီးမယ် ထင်ပါတယ်။ အရင် စစ် အစိုးရခေတ်က သက်ဆုိုင်ရာနုိုင်ငံအသီးသီးရှိ မြန်မာ့သံရုံးတွေရှေ့မှာ၊ ကုလသမဂ္ဂရုံးအပါဝင် နုိုင်ငံတကာရုံးတွေရှေ့ မှာ မကြာခဏဆန္ဒပြလေ့ရှိတဲ့ ပြည်ပရောက်သူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီး က တည်းက ငြိမ်သက်သွားခဲ့တာ အခုချိန်အထိပါပဲ။
(၁၉၉၀ လွှတ်တော်အမတ်တဦးဖြစ်သူ ဦးဗုိုလ်သောင်း အမှာစကားပြောနေစဉ်)
ကျနော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် နော်ဝေးလာစဉ် က ဆန္ဒပြပြီးနောက်ပုိုင်း အခုတကြိမ်ဟာ ပထမဆုံးပါပဲ။ ဒီတကြိမ်ထူးတာကတော့ အလားတူဆန္ဒပြပွဲတွေကို ဂျပန် နဲ့ အမေရိကန်မှာလည်းလုပ်ကြတယ်လုို့သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်က မကြာခဏဆန္ဒပြကြတဲ့ ထုိုင်း၊ အိန္ဒိယနဲ့ အိမ်နီးချင်းနုိုင်ငံတွေ၊ တခြားနုိုင်ငံတွေရှိ မြန်မာတွေဆီကတော့ ဘာအသံမှမကြားရသေးပါ။
တခါ ၀ါရှင်တန်အခြေစိုက် US Campaigne for Burma အပါဝင် မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ၊ တခြား နုိုင်ငံအသီးသီးရှိ အဖွဲ့တွေ၊ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အသံကိုလည်း အရင်လုို မကြားရတော့ပါ။ အခုချိန်မှာ ဒီအသံတွေကုို အရင်လိုပြန်ဖေါ်ဖုို့လုိုမလား။ မြန်မာအစိုးရကုို ဆက်ဖိအားပေးဖုို့ လုိုမလား။ ပြန်သုံးသပ်ဖုို့လုိုလာ နေပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ကောင်းနေတဲ့ ၂၀၁၃ နွေဦးနဲ့ အခု လက်ပတ်နီတွေလမ်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ ၂၀၁၅ နွေဦး အကြား အခြေနေတွေက အတော်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် နော်ဝေးကိုလာစဉ် ၂၀၁၃ မှာ ဆန္ဒပြ တော့ ဒီအချိန်မှာဘာကြောင့်ဆန္ဒပြတာလဲ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆန္ဒမပြပဲ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဆုိုပြီး မီဒီယာတွေက ဆန္ဒပြသူတွေကို မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီတကြိမ်မှာတော့ အဲဒီလုိုမေးခွန်းထုတ်သံ မကြားရတော့ပါဘူး။ တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆုိုရင်တော့ ဒီနေ့အခြေနေဟာ ၂၀၁၃ အခြေနေနဲ့မတူတော့ပါ။ အစိုးရဖက်က ပေးထားတဲ့ကတိတွေအတုိုင်းမဆောင်ရွက်နုိုင် တဲ့အပြင် ကတိပျက်မှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်နှိပ်ကွပ်မှုတွေပါ လုပ်လာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဆန္ဒပြမှုတွေဟာ လုပ်သင့် တဲ့အလုပ်၊ အစိုးရအပေါ် ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေ တကယ်လုပ်ဖုို့လုိုနေပြီဆုိုတာကုို အားလုံးက လက်ခံလာတဲ့သ ဘောမျိုးတွေ့လာနေရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာကုိုင်ထားတဲ့ ကြွေးကြော်သံဆုိုင်းဘုတ်တွေ၊ တောင်းဆုိုသံဆုိုင်းဘုတ်တွေထဲ ကအတုိုင်း မြန်မာနုိုင်ငံဆုိုင်ရာ ဥရောပသမဂနဲ့နော်ဝေးအစိုးရရဲ့ မူဝါဒတွေကုိုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖုို့၊ နုိုင်ငံတကာရဲ့ အကူညီတွေအလုပ်ဖြစ်မဖြစ် ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖုို့ တကယ်ဖြစ်လာစေချင်ရင်တော့ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ၊ ဖိအားပေးမှုတွေက ဒီထက်မက အားရှိဖုို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းကိုဝင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှာဆက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်းဆီ ၀င်လုိုက် ထွက်လုိုက်လုပ်နေသည်ဖြစ် စေ၊ ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့ အဓိကဦးတည်ချက်ဟာ မြန်မာနုိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ဒီမုိုကရေစီထွန်းကားလာရေးပဲ မဟုတ်ပါ လား။ ဒါကြောင့် ဒီတည်ချက်အပေါ်မှာ အားလုံးစုစည်းပြီး ပြည်တွင်း-ပြည်ပ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဟန်ချက်ညီလုပ်သွား ဖို့၊ ဒီမုိုကရေစီနည်းလမ်းမကျတဲ့ အစိုးရရဲ့ လွှဲမှားတဲ့လုပ်ရပ်တွေအပေါ် အသေချာထောက်ပြ ဝေဖန်ဖုို့၊ နုိုင်ငံတကာ အစုိုးရတွေဆီကနေ မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေအပေါ် ဒီထက်မက ထောက်ခံလာအောင် အားလုံး ၀ုိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်ရမဲ့အချိန် ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ။
(ဒီဆောင်းပါးဟာ မတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာရေးပုို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ၁၀ ရက်နေ့ကဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ လက်ပတန်းက ကျောင်းသားဆန္ဒဖြိုခွဲခံရမှုအကြောင်းမပါသေးပါ။ နောက်ထပ် ပြည်ရောက်တွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ နုိုင်ငံတကာရဲ့တုန့်ပြန်ချက်တွေကိုလည်း ဒီဆောင်းပါးထဲ မပါသေးပါ)။